Diyaargarawga shirka wadatashiga Soomaaliya oo ka socda magaalada Muqdisho. – Radio Daljir
Diyaargarawga shirka wadatashiga Soomaaliya oo ka socda magaalada Muqdisho.
Muqdisho, Aug, 15 – Waxaa magaalada Muqdisho ka socda diyaargaraw ku aadan shirka wada tashiga Soomaaliya ee ay waddo Qaramada Midoobey kaas oo la filayo inuu ka dhacaya magaaladaasi 4ilaa 6-da bishan Sebtemper ee soo socota.
R/wasaaraha Soomaaliya Prof: C/wali Max?ed Cali ?Gaas? ayaa sheegay inay guddi u saareen qabanqaabada iyo isku dubba ridka hawlaha shirka, uuna rajaynayo in shirkaasi u dhici doono sidii loogu talagalay. Shirkaan oo ay soo qabaqaabisay Qaramada Midoobey ayaa diiradda lagu saarayaa waxa ay dawladdu qabanayso mudada sanadka ah ee loo kordhiyey iyo sidii looga gudbi lahaa wakhtiga KMG ah.
M/weyne Shariif ayaa shalay dadka reer muqdisho ku boorriey inay nadaafadda iyo bilicda magaalada ka shaqeeyaan iyagoo isu abaabulaya xaafad xaafad iyo degmo degmo, taas u muuqato inay muqdisho isu diyaarinayso martigalinta Shirka.